भा’ग्यमानी मा”न्छेले मात्रै देख्ने, दाहिने शंखफोटो’मा छोएर ॐ लेखी दर्शन गर्नुहोस। – Chautari Online
November 6, 2020 892
शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो। यो विशेषगरी धार्मिक कार्यमा प्रयो गमा ल्याइन्छ। शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो।
यो विशेषगरी धार्मिक कार्यमा प्रयो गमा ल्याइन्छ।जीउँदो शङ्ख समुद्रमा पाइने जलचरले बना एको खबटा हो, यो धेरै जसो वामावर्त अथवा दक्षिणावर्तमा बनेको हुन्छ।
प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न प्रयोजनमा ल्याइ ने शंख एक प्रकारको समुद्री चिप्लेकिराको कडा आवरण हो यो समुन्द्रको किनार मा पाईने गर्दछ। धार्मिक अवसर एवम् सांस्कृतिक कार्यमा यसलाई फूकेर बजाउन पनि सकिन्छ।
तसर्थ यसलाई एक बाजाका रूप मा पनि लिइन्छ। नेपाल, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश आदि मुलुकमा यसको यसरी प्रयोग भएको पाइन्छ ।विषयसूची [लुकाउने] १ किसिम२ हिन्दू धर्ममा प्रयोग३ औषधीका रूपमा प्रयोग४ सन्दर्भकिसिम[सम्पादन गर्ने]शंख विभिन्न किसिमका हुन्छन्, तीमध्ये दाहिना शंख बहुमूल्य मानिन्छ, जुन निकै महँगो हुन्छ ।
यो भगवान विष्णुको दायाँ माथिल्लो हात मा शोभायमान देखिन्छ। बिहान र बेलुकी आरती गर्दा शंख बजाइन्छ । पूजापाठ सुरू गर्दा र सकिने बेलामा पनि शंख बजाइन्छ । कतिपय जातिमा मुर्दालाई घाट लैजाँदा शंख बजाउने चलन छ ।
औषधीका रूपमा प्रयोग[सम्पादन गर्ने]आयुर्वेद उपचारमा शंख भस्मको ठूलो महत्त्व छ ।
शंख भस्म बनाउन शंखलाई माटोको भाँडोमा राखेर पाँच/छ फिट गहिरो खाल्डोमा गुइँठाले पोलेर निकाली घ्यूकुमारीको रसमा पिन्नु पर्छ । यसमा क्याल्सियम, क्याल्सियम सल्फेट, म्याग्नेसियम आदि तत्त्व प्रसस्त पाइन्छन् ।
शंख भस्म अम्लपित्त, अनुहारको चाया, डण्डीफोर र खत हटाउन उपयोगी हुन्छ ।अनिद्राको बिरामीलाई कानमा दुइटा शंख राख्दा समुद्री लहरको कर्णप्रिय आनन्दले निन्द्रा लगाउँछ भने शंख जलले मुख धुँदा अनुहार उज्यालो हुन्छ ।
यो पनि पढ्नु होस :-काठमाडौँ, भुलेर पनि अनुहारमा नल गाउनुस् यी चिज, जसले बनाउँनेछ अनुहारलाई कुरुप:-सु न्दर बन्ने चाहना हरेकको व्यक्तिको हुन्छ ।
जसले पनि अनु हारलाई सुन्दर बनाउन सके सम्म हर कुराको प्रयोग गर्ने गर्छन् । मानव शरिरको सबैभन्दा संवेदनशिन क्षेत्र भनेको नै अनुहार हो यहि अनुहार नै कुरुप भयो भने विभिन्न समस्याहरु आउन सक्छन् ।
चाया पोतो डन्डीफोर जस्ता समस्याले सुन्दर अनुहारलाई कुरुप बनाएर सुन्दरता नै लुटिदिन्छ त्यसैले अरुको लहैलहैमा लागेर अनुहारमा जे पायो त्यहि प्रयो गर्नु हुँदैन् ।
आज हामी तपाईहरुलाई अनुहार सुन्दर बनाउनको लागि भनेर प्रयोग गर्न नहुने ५ चीजको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ । जसको प्रयोगले अनहारलाई कुरुप बनाउनेछ ।
३.खाने सोडा : धेरैको बुझाइ छ अनुहार सफ गर्नको लागि सोडा प्रयोग गर्नु पर्छ । तर यो बुझाइ एकदमै गलत हो ।
Prevकाभ्रेमा बो’क्सी भ’गा’उने भन्दै एक बालिकाले महिलाको गाला तातो पन्यूले डा’मेपछि
Nextमुकेशकी श्रीमती सुनिताको बिलौना : छोरा बाबा खोई भन्छ, म कहाँबाट ल्याउँ ?
ग्यास्ट्रिकले सताएर हैरान हुनुहुन्छ ? यस्तो सजिलो उपाय बाट हटाउन सकिन्छ ग्यास्ट्रिकको समस्या !